बच्चा नहुने महिलालाई बच्चा हुने बनाइदिन्छु भन्दै यस्तो गरेपछि ! – दैनिक नेपाल न्युज
काठमाडौं । बिवाहित जोडिको बच्चा हुनु एक जैविक प्रकृया हो । यो प्रकृया असन्तुलित भए बच्चा नहुनसक्छ । यसका लागि चिकित्सा विज्ञानले केही उपायहरु समेत पत्ता लगाएको छ । तर कोही कोही धार्मिक अनुष्ठानमा बिश्वास गर्छन् । शक्तिपीठ र बाबाहरुको भर पर्छन्भारतमा भने अचम्मको घटना भएको छ । बच्चा नभएको भन्दै आएकी महिलालाई बच्चा हुने बनाइदिने भन्दै बाबा आफैं जुटेको पाइएको छ । घटना उत्तर प्रदेशको राजधानी लखनऊको हो ।
त्यहाँ काले बाबा नाम गरेको एक मानिस थिए । जो यस मामिलामा त्यहाँ चर्चा पाएका थिए । आजतकमा छापिएको समाचार अनुसार स्थानीय व्यक्तिले सूचना पाएपछि घटनास्थलमा पुगेर बाबालाई नियन्त्रणमा लिएका थिए । संसारमा कहिले काँही निकै अचम्म लाग्दा खबर आउने गर्छन । हालै स्पेनवाट यस्तै अनौठो समाचार आएको छ । स्पेनमा एक गोरी महिलाले कालो बच्चा लाई जन्म दिएपछि आफ्ना श्रीमानलाई अनौठो आ’रोप लगाइन् ।
उनले तुरुन्तै आफ्नो श्रीमानको हात तान्दै भनिन, कुकुर ! यो कस्को छोरो हो, मलाई थाहा थियो कि तिमीले मलाई धोका दिइरहेका छौ । हेर त यो तिमीले यो के गरेका छौ । श्रीमतीले यसो भन्दा उनका श्रीमान छक्क परेर उनको अनुहारमा हेरीरहेका थिए । अवस्था यस्तो आयो की त्यहाँ वि’वाद समेत बढ्यो । बि’वाद बढेपछी उनलाई मेडिकल टोलीले कोठा छोड्न भन्यो ।
पक्कै पनि, उनीहरूलाई त्यहाँ के हुँदैछ भनेर बुझ्नको लागि सजिलो थिएन। एक चिकित्सकले भने,’पतिले काली केटिसङ्ग सम्पर्क गर्दा श्रीमती ले कालो बच्चा जन्मा’उदिनन त्यसैले महिलाले भनेका कुराहरुको कुनै मतलब भएन । हामीले हाँस्नु पनि सकेनौ तर उनको कुरो हासो लाग्दो नै थियो । हाम्रो सन्देशबाट साभार